Basketball Féminine”, notontosaina tetsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina, ny SBBC Malagasy ka tafakatra hiatrika ny « Phase finale de la Coupe des Clubs Champion » hotontosaina eto Madagasikara amin’ny volana desambra 2019 ho avy izao miaraka amin’ny Mb2All vehivavy. Nomontsaniny 118-26 koa ny ekipa Pouzzolane avy any Comores.
Tapitra omaly alahady 03 novambra io ihany tetsy amin’ny “Parking” etsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina ihany ny fifaninanana basikety 3 x 3 nokarakarain’ny Zone 7 Afrika ho fampiroboroboana an’ity taranja ity ka tafavoaka ho mpandresy tamin’izany ny Sebam 2 vehivavy sy ny Tms lehilahy.
Mbola omaly alahady 03 novambra 2019 ihany koa no nifarana ny fifaninanana “Road To Bal” niarahana tamin’ny NBA ka ny vokatra farany azo dia : Usoni Bc (Com) 74 – 121Kpa (Ken) ; Cobra Sport (Ssd) 63 – 82 Gnbc (Mad). Tafita amin’ny Elite 16 amin’ity fifaninana ity ny Gnbc satria nitana ny laharana faha-2.